Fanjakana tsara tantana : mahaliana ny vahoaka Malagasy | Conseil de Discipline Budgétaire et Financière
par cdbf | Oct 14, 2019
Mifanindran-dalana amin’ny taona voalohany niasan’ny “Conseil de Discipline Budgétaire et Financière” io fotoana io. Araka izany nibahan-toerana ny fanaovana tatitra ny zavabita sy ny famoahana am-pahibemaso ny vokatry ny fanadihadiana momban’ny fampidiram-bolampanjakana izay nataon’izy ireo.
Olo-manan-kaja maro no tonga nanome voninahitra ity lanonana ity ka anisan’izany ny Filohan’ny Fitsarana avo momban’ny Lalam-panorenana, ireo masohivoho sy mpiara-miombona antoka vahiny maro izay miasa sy monina eto Madagasikara toy ny Masoivohon’ny Nosy Maorisy, ny solotenan’ny Masoivohon’ny vondrona Eropeana sy ireo Sekretera Jeneraly sy Tale Jeneraly. Tonga nanotrona ihany koa ireo fiaraha monim-pirenena, ireo mpianatra, ary ny olompirenena maro be.
Anisan’ny nanana anjara fitenenana Andriamatoa Constantin GRUND, mpisolo-tena maharitra monina eto Madagascar ny Friedrich Erbert Stiftung, izay mpanohana ny hetsika. Nanamafy izy tamin’ny lahateniny fa asa mendrika ny fampiroboroboana ny fanjakana tsara tantana izay iandraiketan’ny CDBF eto amin’ny firenena.
Nandritra ity lanonana ity no nanaovana fanentanana ireo mpisehatra amin’ny volam-panjakana mba hametraka ho vaindohan-draharaha ny mangarahara sy ny tamberin’andraikitra ary ny kolotsain’ny fahombiazana (culture d’efficacité). Nampahafantarina tamin’io fotoana io ihany koa fa zon’ny mpanjifa tsirairay ny mitaky ny “quittance” na fanamarinana ara-dalàna isaky ny mandoa vola eny amin’ny sampan-draharaham-mpanjakana izy ireo.
Fanatsarana ny fampidiram-bolampanjakana: tompon’andraikitra ny olom-pirenena tsy an-kanavaka
Tontosa ny harivan’ny alakamisy 10 oktobra 2019 tao amin’ny Hotel Carlton Madagascar Anosy, ny famelabelarana arahin’adihevitra momban’ny tontolon’ny fanjakana tsara tantana eo amin’ny lafiny fampidirambolam-panjakana izay nokarakarain’ny Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF). Mpandray anjara dimy no tonga namakafaka ny tontolon’ny fampidiram-bola eny amin’ny sehatra misy azy avy.
Andriamatoa GERMAIN, Tale Jeneralin’ny Hetra, no nanokatra ny famelabelarana. Nasongadiny tamin’izany ny fampidirana ny hetra anatiny sy ny fanaraha-maso izay atao amin’izany. Navoitrany tao ihany koa ny fanapariahana sy ny fampanaraham-penitra ny sampandraharaha miandraikitra ny hetra amin’ny alalan’ny “Digitalisation” (na ny fampiasana ny hai-tao ara-kajy mirindra) mba hampihena ny fifaneraserana mivantana eo amin’ireo mpandoa hetra sy ny Fanjakana. Anisan’izany ny “E- Hetra paiment”, ny “Hetraphone” sy ny “Hetraonline” izay fanavaozana ataon’ny eo anivon’ny foibem-pitananana ny hetra amin’izao fotoana izao.
Andriamatoa Heritiana RAVELOJAONA, Talen’ny Gestion des Activités Minières, sy Ramatoa Sylvie GILBERT, Tale iraisam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena ara stratejika ao Toamasina, no nisolotena ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharano-karena Stratejika. Namelabelatra ny momba an’ireo vola miditra avy amin’ny harena an-kibon’ny tany ary nampahafantatra ny rafitra misy eo amin’ny fizarana ireo vola ho amin’ireo antokon-draharaham-panjakana sy ireo vondrom-bahoaka itsinjarampahefana izy ireo.
Ny foibem-pitantanan’ny tahirimbolam-panajakana ihany koa dia nandray anjara tamin’ny alalan’ Andriamatoa Alain FALISOA, Chef du Service de la Réglementation Comptable et Financière eo anivon’ny Direction de la Comptabilité Publique. Nanazava ny anjara asan’ny tahirimbolam-panjakana eo amin’ny lafiny fampidiram-bola izy ary nosiganina manokana ny loharanom-bola ivelan’ny hetra. Nanamafy ny fametrahana ny « Guichet unique » izy mba itsinjovana ny zon’ny mpandoa vola sy mba hanana antoka amin’ny fampidiram-bolam-panjakana.
Namarana ny famelabelaran-kevitra ny solotena avy amin’ny Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, Andriamatoa Jean Arnaud BARAKA, Lehiben’ny Sampandraharaha misahana ny fampiroboroboana ny fanjakana tsara tantana, izay nanome fanazavana ny mahakasika ny fahadisoampitanana eo amin’ny lafiny fampidirambolam-panjakana izay ahazoana sazy eo anivon’ny CDBF. Nanararaotra nitondra fanentanana ny amin’ny tokony hitakian’ny mpanjifa fanamarinana ara-dalàna na ny « quittance » ity farany. Adidin’ny olom-pirenena tsy ankanavaka, raha ny nambarany, ny fanatsarana ny fampidiram-bolampanjakana.
Nafana ny adihevitra ary hita fa liana tamin’ny lohahevitra ireo olona maro tonga nanatrika izany. Saika niompana tamin’ny fitsinjarana ny vola azo avy amin’ny harena an-kibon’ny tany, ny fanafoanana ny hetra alain’ny Fanjakana amin’ireo entana sasantsasany ary ny fanaovana lalàna tokana mifehy ny fampidiram-bolampanjakana ny fanotaniana napetrak’ireo mpanatrika izay nanao sesilany.